Soo dejisan WeChat 2.6.2 – Windows – Vessoft
Soo dejisan WeChat
Bogga rasmiga ah: WeChat
WeChat – wargeeysi caan ah oo la xiriirta lana wadaagayo faylasha. Software wuxuu taageersan yahay isgaadhsiinta fariimaha, fariimaha codka iyo fiidiyowga, oo la wadaago sawirrada ama faylasha la isticmaalayaasha kale. WeChat waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku darto faylasha qiyaasta kala duwan ee kaydinta daruurtu, taasoo lagu kaydin karo muddo dheer. Software wuxuu qabsan karaa oo soo diri karaa sawirada shaashadda kaas oo aad ku dari karto qoraalka, qaababka ama waxyaabaha kale. Sidoo kale WeChat sidoo kale waa mid aad u fiican in la wareejiyo faylasha oo lala xiriiro xiriirada isticmaalaya nooca gacanta mobile ee codsiga. WeChat wuxuu ku dhacaa qadar yar oo ah khayraadka nidaamka iyo inuu sahlan yahay isticmaalka interface.
Fariin degdeg ah
Isgaadhsiinta codka iyo codka
Keydinta cidda leh
Faallo ku saabsan WeChat
WeChat Xirfadaha la xiriira
Skype 8.37.0.98 iyo 7.41.0.101
MyChat 7.2 Client, Server iyo Portable
Tool qoraalka, codka iyo video fariimaha. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan faylasha iyo dar dadka isticmaala in ay xiriirada aad ka codsiyada kale.
Tani waa xal lagu kalsoonaan karo oo laga helo shirkad leh sumcad fiican ee warshadaha internetka si looga ilaaliyo kombuyuutarka lagaga hortagayo hanjabaadyo waaweyn, phishing iyo weeraro internet ah.
Tani waa xal casri ah oo casri ah si kor loogu qaado ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed ee ka dhanka ah weerarrada shabakada, khayaanada, spam, rootkits, ransomware, iyo spyware.